ခရီးဝေးသွားတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ playlist မှာ ဒီလိုသီချင်းလေးတွေ ရှိထားဖို့တော့ လိုမယ်နော်…
On June 28, 2018 By Angel
ခရီးဝေးသွားတဲ့အခါ ကားမောင်းရင်း အိပ်ငိုက်မှာကြောက်တာမျိုး/ ကားစီးရတာပျင်းလာတာမျိုး ဆိုရင်တော့ ဒီသီချင်းလေးတွေ ရှိဖို့တော့လိုမယ်နော်။ ဝုန်းဒိုင်းကြဲမယ့် Rap သီချင်းတွေတော့ နားထောင်ရတာမကြိုက်ပါဘူးဆိုရင် ဒီသီချင်းလေးတွေက ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ နားငြီးလောက်တဲ့ထိ စိတ်ပျက်စရာကောင်းမှာ မဟုတ်သလို တက်တက်ကြွကြွဖြစ်စေမယ့် သီချင်းတွေကို အဓိကစုစည်းထားတာပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ဘယ်သီချင်းလေးတွေဖြစ်မလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးချင်တဲ့ သီချင်းလေးကတော့ Anne Marie ရဲ့ 2002 လို့အမည်ရတဲ့ သီချင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးကတော့ Anne Marie ရဲ့ Speak Your Mind ဆိုတဲ့ album ထဲကဖြစ်ပြီး Ed Sheeran ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရေးသားခဲ့တဲ့ သီချင်းတပုဒ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းပုံစံလေးကတော့ နားထောင်သူကို တက်တက်ကြွကြွဖြစ်စေမယ့် သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး ငယ်ဘဝကိုတစိတ်တပိုင်းလေးကိုပါ ပေါ်လွင်အောင်သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယသီချင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ Dua Lipa ရဲ့ IDGAF (I don’t giveafuck) ဆိုတဲ့ သီချင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝ motivation ပေးမယ့်သီချင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ Billboard Hot 100 မှာ ၄၉ ခုမြောက်နေရာရခဲ့တဲ့ သီချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခပ်ထန်တဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့ ရည်းစားကိုပြောချင်တဲ့ စကားလုံးအပြင်းစားတွေနဲ့ ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတခါသီချင်းလေးကတော့ ထွက်ထားတာမကြာသေးတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ဖောက်ပြန်ခံရတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် အသဲကွဲသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသဲကွဲသီချင်းဆိုလို့ ဆွဲငင်ပြီး ပျင်းစရာကောင်းလောက်မယ်လို့တော့ မထင်စေချင်ပါဘူး။ ဒီသီချင်းလေးကို Sugarland ကသီဆိုထားပြီး featuring အနေနဲ့ Taylor Swift ကပါဝင်သီဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းလေးနာမည်ကတော့ BABE တဲ့…..
နောက်ထပ်ဖော်ပြပေးချင်တဲ့ သီချင်းလေးကတော့ Hailee Steinfeld ရဲ့ Capital Letters ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးကတော့ Fifty Shades Series ရုပ်ရှင်တွေထဲက ဇာတ်ဝင်သီချင်းတစ်ပုဒ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူခြင်းသာသိနိုင်တဲ့ စာသားတွေကို ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လို့ ချစ်သူနဲနှစ်ဦးထဲ ခရီးထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ လုံးဝလွင့်လို့ ကောင်းမယ့်သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။
နောက်ဆုံးတပုဒ်အနေနဲ့ Love Myself ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးကိုတော့ အပေါ်က Capital Letters သီချင်းကို သီဆိုသူ Hailee Steinfeld ကဘဲ သီဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးအကြောင်းကတော့ သီချင်းရဲ့နာမည်နဲ့တင် သိနိုင်တာမို့ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမလိုလောက်ပါဘူး။ ငါ့ကိုယ်ငါချစ်တယ် ဘယ်သူမှမလိုဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ သီဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မြူးမြူးကြွကြွနဲ့ motivation ဖြစ်စေတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တာကြောင့် ဒီသီချင်းလေးကလည်း သင့်ရဲ့ playlist ထဲမှာ ရှိထားဖို့လိုပါတယ်နော်။
ကဲ ဒီလောက်ဆို ကိုယ့်ရဲ့ playlsit ထဲမှာ ဒီသီချင်းလေးတွေကို အမြန်ဆုံးထည့်ထားဖို့ လုံလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ နားထောင်ပြီးရင် အကြိုက်ချင်းတူနေမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ် သူငယ်ချင်းတို့ရေ….
PREVIOUS POST Previous post: ဇွန်လလယ်ရဲ့ တစ်ပတ်အတွင်း Youtube မှာ ထိပ်သီးငါးခုဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းတွေက?
NEXT POST Next post: Album အသစ်နဲ့ နတ်သက်ကြွေလာတဲ့ Girl group အသစ်ဆက်ဆက်လေး Momoland